ह्वाट्सएप चलाउनुहुन्छ ? त्यसोभए थाहा पाईराख्नुस् ह्वाट्सएपका एकदमै नयाँ यी फिचरहरु - Technology Khabar
» एप्लिकेसन » ह्वाट्सएप चलाउनुहुन्छ ? त्यसोभए थाहा पाईराख्नुस् ह्वाट्सएपका एकदमै नयाँ यी फिचरहरु
काठमाडौं । तपाईँ ह्वाट्सएप कत्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? नियमित चलाउनुहुन्छ भने हालै जोडिएको नयाँ फिचर्स जसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ ? यदि छैन भने हामी यहाँ ती फिचरहरुको बारेमा बताउनेछौं ।
केहि यस्तो फिचरहरु आएका छन् जसको मदतबाट यो अझ ज्यादा भरोसायोग्य र सुरक्षित एप बनेकोछ । अब जानौं ती लेटेस्ट फिचर्सबारे-
फिंगरप्रिन्टबाट नै खुल्दछ एप
ह्वाट्सएप सधैं प्राइवेसी को हिसाबले असुरक्षित रहदै आएको छ । यो एपलाई अरुबाट बचाउन सधैं थर्ड पार्टी एपको मदत लिईन्छ । युजर्सको यसै समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनिले फिंगरप्रिंट लक समावेश गरेको हो । अब तपाईको औंलालाई स्क्यान नगरी यो एप खुल्दैन ।
बिना अनुमति ग्रुपमा जोड्न नमिल्ने
पछिल्लो केहि वर्षमा तपाई धेरैपटक आफसेआफ तपाई यस्तो ग्रुपहरुमा जोडिएको देख्नुभएको होला जसबाट तपाईँ टाढै रहन चाहनुहुन्थ्यो । कम्पनिले यो समस्याको पनि समाधान खोजिसकेको छ । तपाई सेटिंगमा गएर प्राइवेसी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि जबसम्म तपार्इँ स्वयम् कुनै ग्रुपमा जोडिनु हुन्न कसले तपाईँलाई कुनैपनि ग्रुपमा जोडन् सक्दैन् ।
ग्रुप कल बटन
अहिलेसम्म तपाईँ एक जनासँग मात्रै ह्वाट्सएप कलमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ । तर कलिङ्ग को बढ्दो लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनिले ग्रुप कल बटनको पनि व्यवस्था गरेको छ । यो फिचरको मदतबाट तपाई एक पटकमै ४ जना व्यक्तिहरुसँग कुरागर्न सकिन्छ ।
फरवार्ड म्यासेजको दुई साइन
गलत खबर र सुचनाहरु बाट बचाउन को लागि ह्वाट्सएपले फरवार्ड साइन पनि परिवर्तन गरेको छ । कोही एक साथीको म्यासेज फरवार्ड गर्दा एक मात्र फरवार्डको संकेत देखिन्छ, यदि त्यहि म्यासेज ४ जनाभन्दा बढिले फरवार्ड गरेमा यसको संकेत बदलिन्छ । यो युजर्सलाइ फेक न्युजबाट बचाउन गरिएको हो ।